Danjire Cali Americo oo Khudbad u Jeediyay Ardada Wax Ka Barata Jaamacada Mount Kenya ”SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Danjire Cali Americo oo Khudbad u Jeediyay Ardada Wax Ka Barata Jaamacada Mount Kenya ”SAWIRRO”
Safiirka dowlada Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya danjire Maxamed Cali Nuur Americo ayaa maanta khudbad uu kaga hadlayay xaalada dalka Soomaaliya iyo marxaladihii kala duwanaa oo uu soo maray u jeediyay ardada wax ka barata Jaamacada Mount Kenya xarunta ay ku leedahay magaalada Nairobi.
Safiirka ayaa lagu sharfay in khudbad ku aadan xiriirka soo jireenka ah ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya u jeediyo ardada kala duwan ee wax ka barata jaamacada Mount Kenya oo ay ku jiraan ku dhawaad 2500 oo arday Soomaali ah.
Danjire Maxamed Cali Nuur Americo ayaa ardada waxa ka barata jaamacada Mount Kenya uga sheekeeyay marxaladihii kala duwanaa oo uu soo maray dalka Soomaaliya,isagoo sheegay in dalka uu soo maray labo doorasho oo xur ah.
Danjire Cali Americo ayaa aradada u sheegay in dalka Soomaaliya uu ka soo kabsaday marxaldo kala duwan,hadana uu ka soo kabsanayo marxaladihii kala duwanaa oo uu soo maray,aynaka jirto dowlada Federaal ah.
Safiirka dowlada Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamed Cali Nuur ayaa sheegay in dalalka Soomaaliya iyo Kenya uu ka dhaxeeyo xiriir wanaagsan oo siyaasadeed iyo mid dhaqaale.
Safiirka ayaa intaasi ku daray in todobaadkii sedax duulimaad oo ka baxa Kenya ay aadi jireen Soomaaliya,hadana ay maalin kasta sedax duulimaad tagaan Soomaaliya.
Maamulka Jaamacada Mount Kenya ayaa danjire Cali Americo uga mahad celiyay khudbada ku aadaneyd xiriirka soo jireenka ah ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya iyo marxaladihii kala duwaan oo uu dalka Soomaaliya soo maray,taasi oo uu u jeediyay ardada wax ka barata jaamacada.
Danjire Cali Americo ayaa u mahad celiyay ciidamada AMISOM oo ay qeyb ka yihiin ciidamo ka socda dalka Kenya.
Danjire Maxamed Cali Nuur Americo ayaa noqonaya Safiirkii ugu horeeyay oo afrikaan ah oo khudbad ka jeediya jaamacada Mount Kenya xarunta ay ku leedahay magaalada Nairobi.
Sawir qaade:-C/raxmaan Cumar Cabdi(Somaali)
Madaxweynaha J. F. S. iyo wafdi uu hoggaaminayo oo galabta u ambabaxay dalka Masar